HomeWararka MaantaGobolka Luhansk ee Ukraine oo dagaalo adag maanta ka dhaceen
May 22, 2022 Wararka Maanta 0
Dagaal qaraar ayaa ka socda meel u dhow magaalooyinka Sevierodonetsk iyo Lysychansk ee gobolka Luhansk, sida ay sheegeen saraakiisha guud ee Ukraine.
Ciidamada Ukraine ayaa la kulmaya weerarrada madaafiicda Ruushka ee ku wajahan guud ahaan jiidda hore, sida ay sheegeen hoggaamiyeyaasha millatariga Ukraine Axaddii. Ciidamada Ruushka ayaa isku dayay in ay xoog ku galaan tuulooyin ka baxsan Sevierodonetsk, ilaa iyo hadda ma aysan guuleysan.
Dhowr maalmood, khadka saadka ee ciidamada Ukraine ee aaggan ayaa la isku dayay in Ruushka uu gooyo.
Isla mar ahaantaana, Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ku dhawaad ​​40 bartilmaameed ay 24-kii saac ee lasoo dhaafay duqeymo dhanka cirka ah ka dhaceen. Kuwaas waxaa ka mid ah, waxaa jiri doona shan bakhaar oo hub ah oo ku yaal gobolka Donbas, oo ah halka ay ku taal Luhansk.
Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyj ayaa Sabtidii sheegay in ciidamada Ukraine ay ku guuleysteen inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka ee weeraray magaalooyinka Sevierodonetsk iyo Slavyansk. Xaalada Donbas ayuu ku tilmaamay mid aad u adag.